Suudaan oo ka hor-timid qorshaha dowladda Itoobiya ee biyo xireenka wabiga Nile - Jowhar Somali Leader
Home Somali Suudaan oo ka hor-timid qorshaha dowladda Itoobiya ee biyo xireenka wabiga Nile
Suudaan oo ka hor-timid qorshaha dowladda Itoobiya ee biyo xireenka wabiga Nile
Ra’iisul Wasaaraha Suudaan Abdalla Hamdouk ayaa ka soo horjeestay fikirka ay dowladda Itoobiya soo jeedisay ee ku saabsan qaabka loo buuxinayo biyo xireenka Wabiga Nile.
Hamdouk ayaa sheegay inay jiraan qodobo dhinaca farsamada ah oo aan weli laga heshiiyeen, waxaana uu intaa ku daray in aanay aqbaleyn qorshaha dowladda Itoobiya wadato.
Wada hadaladii dowladaha Masar, Itoobiya iyo Suudaan ka lahaayeen arrimaha wabiga Nile ayaa hakad ku yimid, kaddib markii Itoobiya ay diiday heshiis is faham ahaa oo dalalkan u dhaxeeyay oo ay ka soo shaqeeyeen Mareykanka iyo Bangiga Adduunka.
Masar ayaa todobaadkan cabasho ku aadan wabiga Nile u gudbisay Qaramada Midoobey, iyadoo ka biya diidan qorshaha biyo xireenka Nile iyo qaabka dowladda Itoobiya dooneyso inay ku furto biyo xireenkaas.
Dowladaha Masar iyo Suudaan ayaa horay u sheegay inay biyo yari soo foodsaareyso, haddii biyo xireenka ay hirgelisay Itoobiya lagu bilaabo in lagu keydiyo biyaha wabiga, si ay koronto uga dhaliso.
Itoobiya ayaa mashruucan biyo xireenka ku bixisay mallaayiin doolar, si ay uga baxdo baahida dhinaca korontada ka heysato, waxaana qorshuhu yahay in bisha July ee soo socota in la bilaabo keydinta biyaha.